Magnolia Mississippi Mayor gbara arụkwaghịm: Laghachi na mgbọrọgwụ na Africa
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Magnolia Mississippi Mayor gbara arụkwaghịm: Laghachi na mgbọrọgwụ na Africa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Magnolia Mississippi Onyeisi
Laghachi mmadụ n'ụlọ nna ya biri ma rụọ ọrụ na-abụ ihe a na-ahụkarị maka ndị Africa bi na mba ọzọ. Otu a ka ọ dị maka otu Onye Isi Obodo nke obodo dị na Mississippi, USA.
Mgbe ndụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị gara nke ọma na United States, Onye isi obodo Magnolia na-alaghachi ibi na ịrụ ọrụ na Tanzania.
Mmụọ nsọ sitere n'aka onye nwụrụ anwụ Marcus Garvey, onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị Jamaica na-atụ aro ka ndị agbụrụ Africa laghachi na kọntinent nne ha.
Ndị na-eme njem nlegharị anya n'Africa na-agba mbọ ịdọta ndị Africa nọ na mba ọzọ ka ha bịa na kọntinent ha.
N’ịkwanyere mpaghara nna ochie ya nke Africa ùgwù, Magnolia Mississippi Mayor gbara arụkwaghịm ma Maazị Anthony Witherspoon n’ọnwa gara aga raara ndụ ya na azụmahịa ya nye Africa.
Onye isi obodo gara aga nke obere obere obodo Mississippi ahụ kwuru na ya akwagala Africa iji rụọ ọrụ azụmahịa, ọ na-agba ndị ojii ndị ọzọ ume ka ha tụlee ịkwaga na kọntinent ahụ.
Atedlọ ọrụ Associated Press (AP) kọrọ na ngwụcha izu a na Anthony Witherspoon gbara arụkwaghịm na Disemba 31, 2020, site na ọkwa mayoral Magnolia ya. Ọ bụ onye isi obodo kemgbe ọ meriri ntuli aka pụrụ iche na 2014, yana ọnwa isii fọdụrụ iji mechie afọ 6 ya.
Akụkọ kwuru na onye bụbu Magnolia Mayor kwagara na Dar es Salaam, TanzaniaiaIsi ego azụmaahịa e guzobere n'ihe dị ka afọ 155 gara aga, iji dozie ma rụọ ọrụ ya.
Ozi ndị ọzọ gosipụtara na Maazị Witherspoon kwagara Africa iji biri na East Africa site na ntinye onwe ya ibi na mgbe ahụ na-azụ ahịa ya na kọntinenti nna nna ya.
"Anọ m ebe a na Motherland, na-eke mmekọrịta mmekọrịta na netwọkụ na ụmụnne m nwoke na ụmụnne m nwanyị," Witherspoon kwuru na Jenụwarị 24, 2021, site na mgbasa ozi Facebook ya.
Ọ na-ejikwa ọwa YouTube na ihe akaebe nke ndị kwagara Africa.
Fọdụ n'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ gụnyere ebe ụmụaka bụ nwata, ụlọ akwụkwọ praịmarị, kọleji azụmaahịa nkeonwe, na azụmaahịa gụnyere Back to Africa Tours, ka o kwuru.
“Oge ị ga-akwụsị n’ụgbọelu banye na ọdụ ụgbọ elu Julius Nyerere nke mba ofesi wee hụ ọmarịcha ọdụ ụgbọ elu mba ụwa ebe a na Dar es Salaam, Tanzania, ọ ga-abụ mmalite nke njedebe ụgha niile nwere ndị mgbasa ozi ọdịda anyanwụ nyere gị nri banyere mama anyị Africa, ”ka Witherspoon kwuru.
Witherspoon lụrụ Senator Tammy Witherspoon (Democratic Party), na-anọchite anya Mississippi State Senate District 38. Di na nwunye ahụ nwere ụmụ nwoke abụọ.
Nwunye ya ka bi na Mississippi na-eje ozi na Capitol. Onye bụbu Onye isi obodo ahụ kwuru na ya na ụmụ nwoke abụọ ahụ dị na nwunye gara leta ya na Tanzania na nso nso a.
Anthony jekwara ozi dị ka Onye isi ala nke ọgbakọ Mississippi nke ndị isi obodo Mayors na onye isi oche nke abụọ nke Mississippi Black Caucus nke ndị isi obodo ahọpụtara. Na Mee nke 2018, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye na-enyocha mba ụwa na esemokwu Ntuli aka Onye isi ala na Venezuela.
O kwuru na ọhụụ ya nke inyere ndị America aka ịlaghachi Afrịka bụ ihe sitere n'ike mmụọ nsọ Marcus Garvey, onye ndọrọndọrọ ọchịchị Jamaica bụ onye tụpụtara na ndị agbụrụ Afrịka ga-alaghachi na kọntinent nne ha.
"Enwere m mmụọ ahụ ma ọ dịkarịa ala chọrọ inyere gị aka inyocha Africa n'onwe gị," ka o kwuru.
Ọhụhụ Onye isi obodo gara aga iji nyere ndị Africa nọ na mba ọzọ aka ịlaghachi na kọntinent nne ha sitere n'ike mmụọ nsọ site na njem na njem nlegharị anya dị iche iche iji dọta ndị America sitere n'Africa ileta kọntinenti ha.
The Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB) E guzobela na South Africa maka afọ 2 ugbu a ma na-agbachitere ịdọta ndị Africa nọ na mba ọzọ ileta kọntinent nne ha.
ATB na-arụsi ọrụ ike ugbu a yana ndị njem na ndị njem njem ndị ọzọ n'akụkụ ụwa niile iji kwalite Africa dị ka "Otu Njem Nleta nke Nhọrọ" na ụwa, na-elekwasị anya n'ahịa ndị isi njem nleta na gburugburu ụwa.
Ebumnuche bụ isi nke ATB bụ ịkwado Africa dị ka onye na-eduga ndị njem nleta site na mmepe-njem na-eme njem nleta na ịzụ ahịa na iji akara na ahịa dị mma.
Ihe omumu nke ndi Afrika bu isi ihe nlere anya nke ndi Africa nke ATB na-acho ugbua maka nkwalite na mmepe n'ime ihe nchoputa nke ga adota ndi Afrika no na mba ozo ka ha bia, dozie ma tinye ego ha na Africa.
Otu mbata nke Africa bụ isiokwu nke otu dị iche iche nke ndị Africa nọ na mba ọzọ chọrọ iji nyochaa na ịgbanwe ihe nketa ọdịbendị nke Africa ka ọ bụrụ ebe ndị njem ga-adọta ndị ahụ sitere n'Africa ka ha laghachi na kọntinent nne ha wee chọpụta ebe ha si.
Ndi otu ndi njem nlere anya nke ndi Afrika bu ndi jikotara mba nile maka ime ka ndi ozo maka mmepe nke njem na njem nleta na, site na mpaghara Afrika. Maka ozi ndị ọzọ na otu esi esonye, ​​gaa na africantourismboard.com .